Chikunguru 01, 2020
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaSibusiso Moyo, vanoti hurumende yakapa mizinda inoimirira pasi rese zviuru gumi zvemadhora ekuAmerica pamuzinda wega wega kuitira kuti mizinda iyi igadzirise matambudziko anosangana nevashandi vayo panguva ino yechirwere cheCovid-19.
Vachipa humbowo kukomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika pamusoro pemararamiro ari kuita vamiriri veZimbabwe kunze kwenyika, VaMoyo vati hurumende yakapa mari idzi kumizinda iyi kuitira kuti iawane mari yekurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Vatiwo vanhu vari kushanda mumizinda iyi vari kugara hupenyu hwakaoma sezvo hurumende ichine chikwereti chemihoro yaisina kubhadhara vashandi ava kwenguva yakareba.
VaMoyo vabvumawo kuti kune zviuru neziuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika zhinji pasi rese zviri kuda kudzoka kumusha nekuda kwematambudziko ari kukonzerwa neCovid 19 asi vakati zvizvarwa izvi zvinofanira kubhadhara mari yekudzoka kumusha.
Vati hurumende inobatsira pakugadzirisa magwaro asi vakati vanhu ava vanofanira kubhadhara mari dzekudzokesa kumusha semaendero avakaita kunyika idzi.
Vayambira veruzhinji kuti vasangotumire vana kunodzidza kuzvikoro zvekunze kwenyika asi vasingazogone kuzovariritira zvikurusei panguva dzakaita seino.
VaMoyo vatiwo pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kubva kunze kwenyika zviri kubhadharirwa nemakambani azvaishandira izvo zvinouya zvichigara mumahotera.
Vaimbove gurukota rezvehutano uye vari munyori wezvehutano mubato guru rinopikisa, reMDC Alliance, Dr Henry Madzorera, vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuongorora munhu wese ari kudzoka munyika.
Mune imwo nyaya, mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vasaina mutemo wekuvandudza mabasa ekutapwa kwenhau nekuburitswa kwemashoko weFreedom of Information Act.
Uyu ndemimwe yemitemo iri kudzikwa nehurumende senzira yekushandura mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act uyo usisafambirane nenguva yatiri ino.